Khatarta argagixisada ee Britain - BBC News Somali
Khatarta argagixisada ee Britain
7 Febraayo 2012
Image caption Dagaalyahanada Al-Shabab
Warbixin faahfaahsan oo la xiriirta halista ay argagaxisada ku leedahay dalka Briatian, oo uu soo saaray machad arimaha argagxisada kala taliya dalka Britain, lana yiraahdo RUSI, ayaa ka digaya duufaano halis ah oo is biirsadey oo wadanka ku soo socda mustaqbalka dhaw.
Dhawrka sanno ee socda ayaa machadka waxa uu sheegayaa in shaqsiyaad soo bahaloobay ay ku soo noqonayaan dalkan iyaga oo ka imanaya dalalka ay ka soo dagaalameen, sida Somalia,Nigeria iyo Yemen.
Machadku waxa uu ku sheegay tirada dagaalyahanada shisheeye ee ka barbar dagalamaya kooxda Islaamiyiinta xagjirka ah ee dalka Somalia ee Al-Shabab,afar meelood meel ahaan ay haystaan dhalashada dalka Britain.
Khubarada soo diyaariyey warbxintan ayaa ka walwalsan soo noqoshada dadka ceynkaas ah, iyo inay isku soo beegmi karaan sii deynta maxaabiista dembiyada argagixisada loo heystey dalkan Britain tobanki sano ee la soo dhaafay.
Agaasimaha machadka RUSI, Prof. Micheal Clerk, ayaa sheegaya in dadaalada muddooyinkan lagula tacaalayo aragagixisada iyo ka hortagga in dad badan laga dhigo kuwo xag jir ah ay kala dhantaali karaan dhibaatada dhaqaale ee caalamka, taas oo aaney Britain wax badan ka awoodin. Waxaa uu intaa ku darey in arrimahani ay soo bandhigeen aaney la xiriirin ammaanka ciyaaraha Olympiga, balse ay yihiin kuwo ka qoto dheer.